11/06/2018 - Page 2 sur 5 -
Fanakanan-dalana tany Morafenobe : Mpamily iray namoy ny ainy, zandary efatra naratra mafy
Nahalavoana lehilahy iray 35 taona sy naharatrana zandary miisa efatra hafa indray ny fanafihan-dahalo sy ny fanakanan-dalana niseho tany amin’ny fokontany Ihorombato, kaomina Beravina, distrikan’i Morafenobe ny zoma 08 jona lasa teo tokony ho tamin’ny …Tohiny
Primatiora : Miainga sahady ny kiantranoantranon’ny Mapar
Tsy mahagaga. Tolona ho an’ny fitiavana sy fitadiavan-tseza ranofotsiny no ataon’ireo depiote avy amin’ny Mapar hatramin’ny 21 avrily noho mankaty. Voaporofo izany ankehitriny satria vantany vao voatendry ny praiminisitry ny marimaritra iraisana, dia misisika manao …Tohiny
Fanotorana tany : Mitazam-potsiny ny M2PATE
Miverina mirongatra indray izao ny fanotorana tany sy famefena tsy nahazoana alalana. Tato ho ato mantsy, dia maro ireo olona manototra tany etsy sy eroa sy mamefy avy hatrany toa ny etsy amin’ny Marais Massay. …Tohiny
Andranomena : Tovolahy nitondra scooter maty tsy tra-drano
Nandriaka indray ny rà teny Andranomena omaly tokony ho tamin’ny 09 ora sy sasany maraina. Tovolahy iray nitondra moto scooter no maty tsy tra-drano rehefa nifandona tamina fiara fitateram-bahoaka teny an-toerana. Araka ny loharanom-baovao, dia …Tohiny